ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတိုးတက်မှုနှုန်းလမ်းသစ်တွေထွက်ရှာအံ့သောငှါအဖြစ်လန်းစပြုပြီတရုတ်နိုင်ငံ၏အားကစားစက်မှုလုပ်ငန်း - တရုတ် Tianjin Shengxin အားကစားကုန်စည်
ဖူ - တိုးတက်မှုနှုန်းမောင်းထုတ်ရန်အသစ်များကိုအင်ဂျင်ရှာတွေ့နေချိန်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ, စီးပွားရေးတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့အဖြစ်အသံနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏တည်ငြိမ်အရှိန်အဟုန်တက် Keeping, တရုတ်အားကစားစက်မှုလုပ်ငန်း 2016 ခုနှစ်တွင်လန်းစပြုပြီခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီအားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုညွှန်ကြားရန်နှင့်အားကစားစားသုံးမှုမြှင့်တင်ရန် 2014 ခုနှစ်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 46 ဖိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ကြန်အင်သမိုင်း၏မှတ်တိုင်အဖြစ်မှတ်ထားပြီးမရှိပါ။
ပြည်နယ်မူဝါဒများ, အမျိုးသားစာရွက်စာတမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင် 2015 အတွင်းမှာဖြန့်ချိခဲ့ပြီးပိုတိကျတဲ့အတိုင်းအတာ ယူ. မြို့နှင့်ခရိုင်အဆင့်ဆင့်ပါပြီ။
အားကစား၏အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးကဒီဇူလိုင်လအားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းပေါ်တွင် 13 ငါးနှစ်အရွယ် Plan ကိုထုတ်ဝေလျက်, အစီအစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်အချို့သော 22 နဲ့အခြားဂြိုဟ်တုစာရွက်စာတမ်းများ။ ဤရွေ့ကားစာရွက်စာတမ်းများအားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းအဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးကိုဂျီဒီပီ၏တစ်ရာခိုင်နှုန်း hit ရန်မျှော်လင့်နေသည်ယခုနှစ် 20203ထရီလီယံယွမ် ($ 432 ဘီလီယံ) ကျော်လွန်လိမ့်မည်ဟုရှင်းပြနှင့်အားကစားစားသုံးမှုထို့နောက်နေဖြင့်တစ်ဦးချင်းတစ်ခါသုံးဝင်ငွေ 2.5 ရာခိုင်နှုန်း hit ရန်မျှော်လင့်နေသည် ။
အမျိုးသားကြံ့ခိုင်ရေးအစီအစဉ် (2016-2020) နှင့်ကျန်းမာသောတရုတ်ကောက်ကြောင်း (2030) ကိုလည်းနိုင်ငံသားများ '' ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေး၏အမျိုးသားရေးမဟာဗျူဟာနှင့်လည်းပိုမိုကျယ်ပြန်အားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းညွန်ပူဇော်ဖို့ဒီနှစ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားကစား၏အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး, ပူးတွဲများစွာသောအခြားအမျိုးသားရေးအစိုးရမဟုတ်သောဌာနများ, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမူဝါဒများနှင့်စီမံချက်များနှင့်အတူယခုနှစ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစားအပေါ်, ရေအားကစား, Aero အားကစား, ပြင်ပအားကစားနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများတောင်တန်း။
အဆိုပါအားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းဆက်စပ်ဤမူဝါဒများမှောင်မိုက်၌မျှသာရိုက်ချက်များမဟုတ်; သူတို့တစ်ချိန်တည်းမှာ, လက်တွေ့လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် grounded ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကလာမယ့်နှစ်တွေမှာတရုတ်ကအားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လမ်းပြမြေပုံကိုထုတ်ချပြီ။
ထိပ်တန်း IP ကိုတူး, ငွေပိုမိုကျယ်ပြန်သွားလေ၏
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမြင်ပြီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝယ်ယူဒီရေကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ထုံးစံ၌, တရုတ်အားကစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထင်ရသော 2016 ခုနှစ်တွင်သတိဆောင်ရွက်ရန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်နေတာ၏ပိုကောင်းတဲ့လမ်းထွက်ရှာတော့တယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏လက်လီကုမ္ပဏီကြီး Suning Group မှအီတလီဘောလုံးကလပ်အင်တာမီလန်မီလန်, 270 ယူရိုသန်း ($ 282 သန်း), ယခုနှစ်အားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများထဲကလာသတင်းဖြစ်ကောင်းအကြီးမားဆုံးအပိုင်းအစတန်ဖိုးရှိသဘောတူညီချက်ထဲမှာ 70 ရာခိုင်နှုန်းအစုရှယ်ယာဝယ်ယူခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်းမြို့တော် ပို. ပို. ကြီးမားတုံးအားကစားလုပ်ငန်းများများ၏စျေးကွက်တန်ဖိုးတက်မောင်းဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အာရုံစူးစိုက်နေကြရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ Premiere လူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီ Tencent လာမည့်ကိုးနှစ်က၎င်း၏ထိပ်တန်းမိတ်ဖက်ဖြစ်လာ, FIBA ​​အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ FIBA နှင့် Tencent အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလူမှုကွန်ရက်, အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှု, အွန်လိုင်း streaming များနှင့် e-Commerce ၏နယ်ပယ်များတွင်နေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာအစဉ်အဆက်-တိုးချဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီကြီး Wanda Group မှ 2033 မှလေးခုဘတ်စကက်ဘောကမ္ဘာ့ဖလားဖလား၏ကာလအတွက်လိုင်စင်အခွင့်အရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အရေးရောင်းအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစပွန်ဆာများအတွက် FIBA ​​နှင့်အတူတစ်ဦးသီးသန့်ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
မိတ်ဖက်အဖြစ်ကောင်းစွာပြည်တွင်းမျက်နှာစာပေါ် blossoming နေကြသည်။ အလီအားကစားကျူးဘားများအတွက်သီးသန့်တီဗီအခွင့်အရေးများလွှဲပြောင်းယူတရုတ်က e-Commerce ကုမ္ပဏီတစ်ခုက (တရုတ်တက္ကသိုလ်ဘတ်စကက်ဘောအသင်းက) ။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကုမ္ပဏီမုန်တိုင်းအားကစားအတွက် CBA (တရုတ်ဘတ်စကက်ဘောအသင်းက) တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တို့ပါဝင်သည်ရန်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာ CBA ဒီနှစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီထည့်သွင်းပြီးနောက် CBA ရဲ့တီဗီအခွင့်အရေးများများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု, 2017 ခုနှစ်အလွန်ခက်ခဲတဲ့နှင့်ပြင်းစွာသောအဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Wanda Group မှကအနာဂတ်အတွက်လူသိများတဲ့ entity အောင်ကတိပေး, 2017 အတွက်တရုတ်ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစုစည်းဖို့တရုတ်ဘောလုံးအသင်းမှအတူတက်ရှိနေသေးသည်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအတောအတွင်း Suning အုပ်စုသည်တရုတ်စူပါလိဂ် (CSL) အတွက်အခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တီဗီထုတ်လွှင့်ရေးစင်တာထူထောင်ထားပြီး, ကြီးမားတဲ့အင်ျဂလိ Premier League များအတွက်တီဗီအခွင့်အရေးများ purchasing အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Ti'ao Dongli ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ယင်း IP ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပြင်, အားကစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစက်မှုလုပ်ငန်းအနှံ့ဒေသများ၏တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေးသို့သွားကြ၏။ လွတ်လပ်သောအေးဂျင့်အားကစားဘဏ်တို့ကအားကစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ငွေကြေးအပေါ်သုတေသနစာတမ်းကိုအဆိုအရ, ပိုက်ဆံလည်းအားကစားကွင်းစစ်ဆင်ရေး, အားကစားဖြစ်ရပ်များစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, အားကစားမီဒီယာ, ကာယဗလ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အားကစားခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်အစီအစဉ်များထံသို့သွားလေ၏။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနိုင်ရပြီးနောက်, များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ပိုပြီးစားသုံးသူအနိုင်ရတဲ့၏အခြေခံစိန်ခေါ်မှုတွေ့ဆုံနေဖြင့်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြသည်။
Zhong Bingshu, ကာယပညာနှင့်အားကစား၏မြို့တော်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းအုပ်ကြီး, မြို့တော်ကြီးတွေသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရန်အလားတူကြီးတွေအမည်များနှင့်ကလပ်အသင်းများအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်သော်လည်း, စျေးကွက်အပြုအမူအတွက်တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်ပြောင်းကုန်ပြီရှုမြင်ကြောင်းဆင်ဟွာသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
"မြို့တော်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏဒီလမ်းကြောင်းသစ်အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပိုမိုဆင်ခြင်တုံတရားလာပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့ပိုက်ဆံဝင်ငွေစဉ်းစားနေကြသည် 2016 ခုနှစ်နှေးကွေးထားပြီး 2015 ခုနှစ်တွင်နာမည်ကြီးကလပ်အသင်းနှင့်အတူအထူးသဖြင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်မိတ်ဖက်များ၏ဒေသများအတွက်အားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ပွေးလေ၏။ အားကစားဖြစ်ရပ်များအပြင်, ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အပန်းဖြေအားကစားအတွက်စျေးကွက်အလားအလာမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်လည်းမရှိ, "Zhong လေ့လာသည်။
'' အားကစား + စီးပွားရေးကို
cross-စက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစည်းမှုခရီးသွားလုပ်ငန်း, ယဉ်ကျေးမှု, ပညာရေး, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လူမှုကွန်ရက်၏လယ်ကွင်းသို့စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မူကြောင်းကိုတရုတ်အားကစားစက်မှုလုပ်ငန်း၏အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကျယ်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမရှိတော့ရုံဖြစ်ရပ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့န်းကျင်စင်တာ; အလားအလာရှိသောတိုးတက်မှု၏အသစ်အဒေသများသစ်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေထဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ Cross-စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ဤနည်းလမ်း '' အားကစား + အခွင့်အလမ်းများအဖြစ်လူသိများကြသည်။
ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်အားကစား + ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုယူပါ။ 3.38 လူဦးရေသန်းအသွားအလာ, ဆက်သွယ်ရေး, ဟိုတယ်များ, ကူညီနေတဲ့နှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုအတွက် 11.9 ဘီလီယံအထိယွမ် ($ 1.7 ဘီလီယံ) ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းစားသုံးယခုနှစ်ဧပြီမှဇန်နဝါရီလကနေတချို့ 311 အားကစားဖြစ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
ဂိမ်းနှုန်းပျမ်းမျှပရိသတ်ကိုအရွယ်အစားယခုရာသီအသက်ရှင်နေထိုင်ဂိမ်းများကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင် 2015 ခုနှစ်ထက် 2000 ကိုပိုခဲ့ကြောင်းတရားဝင် CSL ဒေတာ, ပိုပိုပြီးပရိသတ်တွေအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ဂိမ်းကိုကြည့်ရှုပြသထားတယ်။ အလားတူခေတ်ရေစီးကြောင်းဘတ်စကက်ဘော, ဘော်လီဘောနှင့်စားပွဲတင်တင်းနစ်အတွက်ပေါ်ထွန်းလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ '' အားကစား + စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၏ဤအစောပိုင်းအဆင့်မှာ၎င်း၏ဓာတ်အားမလုံလောက်မှုကိုကျော်လွှားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အတော်များများကအားကစားကုမ္ပဏီများသည်ဦးစားပေးအခွန်မူဝါဒများပျော်မွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်အချို့သောဒေသခံဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများဝေးစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထက်နောက်ကျနေကြသည်။
အားကစားဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ, အရာအတော်များများသည် non-အစိုးရမဟုတ်သောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လုပ်ရကြပြီမဟုတ်, စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲများတွင်ကစားရန်အားနည်းလက်ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်း, အားကစားအခြေခံအဆောက်အဦများ၏မရှိခြင်းနေဆဲအများအပြားမြို့ကြီးများအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက် Going, စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကအားကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဟုဆိုတရုတ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်အသစ်မြင့်တက်ကြယ်ပွင့်အဖြစ်, သည်းခံခြင်းနဲ့အမူအကျင့်အမြန်အောင်မြင်မှုနှင့်လက်ငင်းအကျိုးခံစားခွင့်များရှာဖွေရေးအတွက်မြို့တော်များ၏ပမာဏနှင့်အတူအစားလောင်းကစားများ၏အခြေခံစျေးကွက်သုတေသနများကအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပါသည်။
Post ကိုအချိန်: ဇူလိုင်-26-2018